Ifenisha yekhishi ngezandla zomuntu siqu
Ngokuzikhethela ukwakha ifenisha yekhishi ngisho nokuyiqoqa kusuka ezingxenyeni ezilungele ukuphoqa umuntu othi nakuba isikhathi siphethwe ezandleni ze-Screwdriver. Ukuvuselela ifenisha nokuphefumula impilo entsha kuyo kulula nakakhulu. Ngezansi sizobuka amakilasi amaningi amakhono, ukuthi ungakwazi kanjani ukuhlangana nokubuyekeza ifenisha yekhishi.
Indlela yokwenza ikhishi elibekelwe ngezandla zakho: umhlangano wekhabhinethi
Akukho lutho oluyinkimbinkimbi lapha futhi kungenzeka kakhulu ukuhlangana phansi nokulenga amakhabhinethi ekhaya.
Ngakho-ke, ukugqoka okukhethekile kubonakala njengeziqiniseko okuthiwa. Lokhu mhlawumbe kuyinto ebaluleke kunazo zonke ebhizinisini lethu: kuzodingeka sijwayelane nalokhu kuqinisa futhi sithole izinto zokuqinisa kanye namathuluzi okusetshenziswa kwawo.
Isimiso somhlangano siyafana kokubili emabhodini amisiwe kanye naphansi. Zombili izinketho ziqoqwe phansi. Ukuzivumelanisa okunjalo kuzokwenza lula umsebenzi wethu. Ungenza futhi ngokwakho. Lapho izimbobo zokubopha izinsimbi zokugqoka, ama-flanks azofanelana kahle futhi izimbobo ziyoba.
Ngakho-ke, sifake izingxenye zekhabhinethi futhi sibophe izimbobo zokuqinisekisa.
Ngaphambi kokwenza ikhabhinethi ekhishini noma itafula, kufanele uthenge i-substrate ekhethekile kusukela ku-chipboard kusengaphambili: umsebenzi wayo ukuvumelanisa ingxenye engaphambili futhi uvimbele ukwakhiwa ukuphazamisa.
Bese sibeka udonga olungemuva.
Ingxenye elandelayo yokwakhiwa kwefenisha yekhishi ngezandla zabo - inhlangano yesakhiwo ibe yinye. Uma amakhabethe ayenawo amakhulu kakhulu, ungaqala ukuwaxhuma komunye nomunye, bese uwabeka endaweni yawo kuphela. Njengomkhuba wokubonisa, abantu abajwayele ukuzibamba ngamakhemitha angu-31 mm baphelele ukuqinisa izigaba phakathi kwabo.
Sisebenzisa izigqoko, sithatha amabhakede phakathi komunye futhi siyilungise.
Okulandelayo, faka udonga olungemuva.
Esigabeni esenziwe ngomumo sihlanganisa imilenze.
Ngokufanayo, amakhabhinethi aphezulu ahlangene, kodwa ahlushwa yizikhalazo endaweni esesimisiwe kakade, emva kokulungisa imigwaqo yokuqondisa.
Indlela yokwenza itafula ekhishini?
Uma ikhishi lakho lingenayo itafula futhi ngeke ukwazi ukusebenzisa imali eningi esikhathini esizayo esiseduze, ungayenza nge-pallets ezivame kakhulu zokhuni.
Kusukela ebhasini sasihlukanisa izikhala ezimbili - lezi yimininingwane emibili yesisekelo setafula, enikeza ukuqina kwesakhiwo sonke. I-angle of cut is 45 degrees, ubude bodamu buyi-320 mm.
Ngaphezu kwalokho, kusukela ngobukhulu be-70x680 mm senza isisekelo setafula.
Ngesisekelo esizoyiqinisa imilenze, lezi zibhodi ziyi-70x680 mm.
Futhi nansi izikhala zethu zokuqinisa yonke indawo ngaphansi kwetafula.
Itafula selikulungele. Okulandelayo, i-pallet yokhuni evame kakhulu ibekwe phezu kwesisekelo nangaphezulu kwengilazi, inqunywe ebukhulu be-pallet.
Njengoba ubona, ifenisha yekhishi, eyenziwe ngezandla, ngezinye izikhathi kudinga izindleko ezincane kanye nomsebenzi osebenzayo nopende.
Ngingazivuselela kanjani ikhishi lami?
Ngezinye izikhathi isikhathi sithatha umonakalo futhi ifenisha ihlala isesimweni esihle kakhulu, kodwa isimilo singasebenzi. Yiqiniso, ukwenza ikhishi elibekwe wena liyathakazelisa kakhulu. Kodwa kungenzeka ukuthi indlela elula, esizoyicabangela ngezansi, izokubonakala ithandeka kakhulu.
Cabanga ngalesi sibonelo saloluhlobo lwe-headset, oluhlanganisa itafula namabhentshi amabili okudlela.
Okokuqala, sisusa i-varnish endala futhi sifinyelele endaweni ehlanzekile ngokuphelele.
Umehluko, njengoba besho, ebusweni.
Ngokulandelayo, usebenzisa itheyipu evamile noma isakhiwo sokwakha "udwebe" ubujamo bejometri.
Nakuba inqubo nokudala, kodwa umugqa kuzodingeka usebenze!
Yilokho ifenisha ibukeka ngaphambi kokuba siqale ukuyiguqula.
Okokuqala, sizosebenza kancane emilenzeni yezihlalo kanye netafula. Sizozibuyisela emhlophe .
Okulandelayo, iya esitolo esikhethekile futhi uthenge upende ngokuqonda kwakho.
Futhi yebo! Sizodweba kuphela ngeminwe yethu, njengezingane. Khona-ke zonke izingxenye zizohlanganiswa ngokulinganayo futhi azikho izingxenye zomzimba ezivela emabhulashi.
Susa i-tape futhi ubabaze umphumela!
Kuhlala ukulungisa umphumela nge-varnish futhi konke kulungele.
Ukuvuselela isethi ekhishini ngezandla zabo kwakuyinto elula futhi elula yokudala.
Indlela yokuthunga indlu nge-siding?
Utshani bokufakelwa ongaphakathi
Ifenisha ephothiwe phansi yendawo yokudweba ngesitayela se-classic
Izitshalo zokufakelwa zendlu yangaphakathi
Amakhansela ngesitayela saseJapane
Ungakwazi kanjani ukuhlanganisa amaphephadonga Komar?
Iyiphi iphepha lodonga lokunamathisela igumbi?
Igumbi lentombazane eneminyaka engu-10 ubudala
Indlu yangasese ngesitayela se-Provence - imibono ethokomele yezingqimba ezisezingeni eliphezulu
Ithebula elenziwe nge-particle board
Inombolo yefulethini ye-Feng Shui
Izibuko ze-gypsum plasterboard etholakalayo
Iwayini elimhlophe lihle
Akureyri - ezikhangayo
Izinkukhu izinhliziyo zilungile
Kungani izimpumputhe ziphupha?
I-Compote yama-apula ebusika
Indlela yokukhulisa i-lemon esitheni?
Strawberry ngesikhathi sokukhulelwa
Umdlalo we-Didactic "I-Seasons"
I-cloth yethathu ngezandla
Izesekeli Zomfashini Spring-Summer 2013
Ukuzenzela ingulube inkukhu nge ingulube
I-Condylomata kubantu besifazane - ukwelashwa
Ungancibilikisa kanjani ushokoledi ku-microwave?
Kungani enye isifuba sikhulu kunomunye?
Burbot - zokupheka
Ungamcasula kanjani umlingisi?